Haweenay sheegtay in ninkeeda uu kellida ka xaday - BBC News Somali
Haweenay sheegtay in ninkeeda uu kellida ka xaday
Haweenayda ayaa waxaa lagu qanciyay in ay galayso qaliin xagga qabsinka ah
Waxaa la xiray nin iyo walaalkii kadib markii haweenaydii uu ninkaas qabay ay ku eedeysay in uu ka xaday mid ka mid kilyaheeda si uu uga helo qarashka gabaatiga oo gabadha ku waajiba.
Sida ay sheegayso warbaahinta, ninkan ayaa xaaskiisa ku qanciyay in ay galayso qaliin xagga qabsinka ah kadibna markii ay caloosha ka cabatay labo sano ka hor ah.
Balse labo baaritaan oo ay gashay sanadkii 2017-kii, ayaa lagu xaqiijiyay in mid ka mid ah kelyahdee ay maqantahay.
Jilaaga caanka ah Om Puri oo geeriyooday
Waxa ay haweenaydani sheegtay in ninkeeda uu si joogto ah u weeydiisan jiray lacagtii gabaatiga, oo dhaqan ahaan dalka Hindiya ay dumarka bixiyaan. Kaas oo inkasta oo ay dowladda mamnuucday 1961-dii, haddane wali aad loogu dhaqmo.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Rita Sarkar ayaa warbaahinta u sheegtay in ay ninkeeda kala kulantay dhibaato badan muddo sanooyin ah.
Waxa ay intaas ku dartay markii ay qaliinka gashay kadib in ninkeeda uu aad ugu adkeeyay in aysan qofna u sheegin in ay qaliin gashay, balse muddo kadib markii ay xanuunsatay ay reerkeeda geeyeen isbitaal, halkaasna loogu caddeeyay in ay kelli ka maqantahay.
Sargaal sare oo booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo Udayshankar Ghosh ayaa wargeyska Telegraph India u sheegay in ay fureen gal dacwadeed iyada oo la tixraacayo sharciga mamnuucista in la bixiyo xubnaha bini'aadamka.
Weerarkii Mareykanka looga dilay kumannaan askari iyo ninkii sida mucjisada ah uga badbaaday